Sechinhu chinokodzerana navatsvene, pakati penyu hapafaniri kana kudomwa zvako upombwe nezvinhu zvose zvakaora kana makaro.
Asi izvi zvinorevawo imi. Mumwe nomumwe wenyu ngaade mudzimai wake sokuzvida kwaanoita iye pachake. Mudzimai ngaaremekedzewo murume wake.
Zvino mabasa enyama anooneka pachena, ndeaya anoti: upombwe nokuita zvakaora, kwouya kusazvibata
Naizvozvo murume achasiya baba vake naamai vake achiva chiname nomukadzi wake, vaviri ava vachiva nyama imwechete.
Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Ani naani anotarisa mukadzi achimuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.’
 noupombwe, noruchiva nomwoyo wakaipa, nounyengedzi nokusazvibata, neshanje, nokushonha Mwari nokuzvikudza noupenzi. Zvakaipa zvose izvi zvinobva mukati, uye zvinon'oresa munhu.”
 Asi kubva pakutanga kwokusikwa kwezvinhu, Mwari wakavasika vari munhurume nomunhukadzi. Nechikonzero ichochi murume anosiya baba naamai vake, achibva abatanidzwa nomukadzi wake. Vaviri ava vachiva muviri mumwechete. Naizvozvo havachisiri vaviri asi vava nyama imwechete. Naizvozvo chabatanidzwa naMwari ngachirege kuparadzaniswa nomunhu.”
 Inwa mvura inobva mumugodhi wako mvura inoerera inobva mutsime rako. Zvisipiti zvako zvongoyerera nenyika here mihoronga yemvura yako iyerere mumigwagwa zvayo here? Ngaive yako yoga kwete yevatorwa vaunavo. Rega kasipiti kako kakomborerwe ufadzwe nomukadzi wapahudiki hwako sesheshe yemhembwe kunaka, senhunzvi yengururu yakanakisa kukuda kwake ngakukuzadze nokufara ugutsikane nguva dzose norudo rwake.
1 VaKorinte 13:4-8
 Rudo runo mwoyo murefu, rune mutsa; rudo haruna shanje uye haruzvitutumadzi haruzvikudzi. Haruiti zvisina hunhu. Rudo harungongwarira zvarwo bedzi; rudo harungoshatirwa shatirwa nhando, haruna pfundepfunde. Rudo harufariri zvisakarurama asi runofarira zviri pachokwadi. Rudo runotakura zvose. Runoramba ruine chitendero. Runoramba ruine chitarisiro, harurasi mwoyo runotirira zvose. Rudo harumboperi. Kuporofita kuchapera; kutaura nendimi kuchaguma. Ruzivo ruchapfuura,
Rwiyo rwaSoromoni 7:6-12
 Hakusi kunaka ikoko kwawakaita chido chemwoyo wangu, iwe unofadza. Iwe wakanyatsoti twi somuti womurara mazamu ako ari iwo zvisumbu zvawo. Ndakati regai ndikwire muti womurara ndibatirire pamapazi awo. Dai mazamu ako aya, kwandiri aita sezvisumbu zvamagirepisi; kunhuwirira kwefemo rako, kuite samaapuru. Uye kutsvoda kwako kuite sewaini yakanakisisa inonyatsodzika iwe, ichiyerera zvayo pamusoro pemiromo namazino. Ini ndiri womudiwa wangu chaanoda chaicho ndini. Uya hako mudiwa wangu, handei kuminda tindogara hedu kumamisha. Ngatifumirei kumunda wamagirepisi tindoona kuti migirepisi yakatungira here uye kuti maruva emugirepisi azaruka here uyezve kuti mipomegiraniti yava namaruva here. Ikoko ndichakuitira zvorudo.
1 VaKorinte 6:13-20
 Chokudya chakaitirwa dumbu dumbu rakaitirwa chokudya. Asi Mwari achazviparadza zvose zviri zviviri Muviri hausi wounzenza asi ndowaTenzi, Tenziwo ndewe muviri Mwari akamutsa Tenzi uye achatimutsawo nesimba rake. Hamuzivi here kuti miviri yenyu inhengo dzaKristu? Zvino ndingatore here nhengo dzomuviri waKristu ndichidziita nhengo dzomuviri wepfambi? Hazvimbofa zvakaitika. Hamuzivi here kuti munhu anozvibatanidza nepfambi anobva ava muviri mumwechete nepfambi? Sokunyorwa kwazvakaitwa zvichinzi, “Vaviri ivavo vachava nyama imwechete.” Munhuwo anobatana naTenzi anova mweya mumwechete naye Sianayi noupombwe. Zvimwe zvitadzo zvose zvinoitwa nomunhu zviri kunze komuviri asi munhu anoita zvoupombwe anotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yaMweya Mutsvene ari mamuri anobva kuna Mwari? Hamusirimi muridzi wezvamuri. Makatengwa nomutengo. Naizvozvo rumbidzai Mwari mumuviri wenyu.